Semalt विशेषज्ञ: वेब पृष्ठ स्क्र्यापिंग के हो?
वेब पृष्ठ स्क्र्यापिंग सेवाहरू वर्ल्ड वाइड वेबमा बिभिन्न वेब पृष्ठहरूबाट डाटा निकाल्न वा स्क्र्याप गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ, र यसले खोज, क्रमबद्ध गर्न र फिल्टरि ease गर्न सजिलोको लागि एक डाटाबेसमा सबैमा झिकिएको डाटा बचत गर्न पनि समावेश गर्दछ। तपाईं यस वेब पृष्ठ सेवाहरूको उपयोग गर्न सक्नुहुनेछ डाटा डाटा स्क्रैप गर्न जुन तपाईंलाई स्रोत वेबसाइटहरूको सबै वेब पृष्ठहरूबाट आवश्यक छ। सेवाले डाटाबेस, स्प्रेडशिट, वा अन्य कुनै ढाँचामा डाटा बचत समावेश गर्दछ।
तपाईको उद्देश्य जे भए पनि यो डेटा स्क्र्यापिंग सेवाले ह्यान्डल गर्न सक्दछ। के तपाइँ प्रतिस्पर्धीको मूल्य अनुगमन गर्न चाहानुहुन्छ? के तपाईं सम्झौता तुलना गर्न वा उत्पादन डाटाबेसको प्रतिलिपि गर्न चाहानुहुन्छ? वेब पृष्ठ स्क्र्यापिंग सेवा तपाईंलाई आवश्यक सबै हुन्छ। तपाईंले केवल स्थान र आवश्यक तत्व निर्दिष्ट गर्न आवश्यक छ। डाटा केवल तपाईंको लागि मात्र निकालिने छैन, यो तपाईंको रूचाइएको ढाँचामा रूपान्तरण हुनेछ।
साना आंकडा को निकासी
यो सेवा विशेष उत्पादनहरूमा संलग्न साना फिगरहरू तान्न वा फिल्टर गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। उदाहरण को लागी, त्यहाँ धेरै स्टक छन्, र तिनीहरूको उद्धरण र मूल्यहरू नियमित रूपमा परिवर्तन गरिरहन्छन्। यदि तपाईंसँग केहि स्टकमा रुचि छ र उनीहरूको मूल्य र उद्धरणहरू अनुगमन गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले यो सेवा प्रयोग गर्नु आवश्यक पर्दछ। स्रोत साइट मा तथ्या change्क परिवर्तन को रूप मा, ती पनि तपाइँको साइट मा खोल्नेछ। यो तपाईं अक्सर स्टक को मूल लामो सूची को माध्यम बाट चल को पीडा बचाउनेछ।
धेरै व्यक्ति सामान्यतया बिभिन्न कम्पनीहरूबाट धितो दर निगरानी गर्छन्। यसको साथ चुनौती भनेको उनीहरूले प्राय: धेरै वेबसाइटहरू जाँच गर्छन्। अलग ट्याबहरूमा दरहरू तुलना गर्न गाह्रो हुन सक्छ। तिनीहरू ट्याब पछाडि ट्याबमा क्लिक गर्नुपर्दछ। तर यो वेब स्क्र्यापि। सेवाहरूको साथ सजिलो हुन सक्छ। तिनीहरू सबै नियमित अपडेट गरिएको पृष्ठमा हुन सक्छन्। धितो दरहरूको अनुगमन एकल पृष्ठमा धेरै सजिलो हुन्छ। वेब स्क्र्यापिंग सेवाले तपाईंलाई विभिन्न वेबसाइटहरूबाट दरहरू स्क्र्याप गर्न र तपाईंको लागि एक पृष्ठमा सबै डाटा बचत गर्न मद्दत गर्दछ। सम्झनुहोस् कि मूल्यहरू स्रोत वेबसाइटहरूमा अद्यावधिक भइरहेको छ त्यसैले तपाईंको आफ्नै प्रतिलिपि पनि अपडेट हुनेछ।
शपिंग वेबसाइटमा विभिन्न उत्पादहरूको मूल्य र छविहरू निकाल्दै
उदाहरण को लागी, मानिसहरू नियमित रूपमा किराना किन्नुहुन्छ। तपाईं यो सेवा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ तुलनाको लागि बिभिन्न वेबसाईटहरूबाट किरानेसरीको मूल्यहरू डराउन। र तपाइँ सँधै अप-टु-डेट जानकारी प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यसोभए, जब पनि तपाई किराना सामानहरूमा जान चाहानुहुन्छ, तपाई केवल फाइल देख्नुहुनेछ र राम्रो डलरको साथ पसलको नोट लिनुहुनेछ। तपाईं पसल A बाट बन्दकोबी खरीद गर्ने निर्णय गर्न सक्नुहुनेछ, र ग्रीन मटर शप बी, आदिबाट।
स्टक फोटोग्राफी, प्रदर्शकहरु, वा विवाह वेबसाइटहरुबाट चित्रहरु को निकाल्ने
तपाईं यो सेवा विभिन्न वेबसाइटहरूबाट छविहरू स्क्र्याप गर्नको लागि पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जुन असंख्य छविहरूले भरिएका छन्। केहि त्यस्ता साइटहरू स्टक फोटोग्राफी साइटहरू, विवाह साइटहरू, र प्रदर्शकहरू केहि उल्लेख गर्नका लागि हुन्।
अवस्थित अनुप्रयोगमा एकीकरण सहज छ
यस सेवाको साथ निकासी डाटा सजिलै तपाइँको कुनै पनि अनुप्रयोगमा एकीकृत गर्न सकिन्छ। डाटा एक स्प्रेडशीट, कागजात कार्यक्रम, CSV, वा अन्य कस्टम निर्मित अनुप्रयोगहरूमा एकीकृत गर्न सकिन्छ। तपाईं पनि सेवा को उपयोग गर्न सक्नुहुनेछ अत्यधिक सुरक्षित वेबसाइटहरूबाट डाटा स्क्र्याप गर्नको लागि जसले गैर-सदस्यहरूलाई रोक्दछ।
तपाईलाई जे चाहिने सेवा चाहिन्छ, कम्पनीलाई लागत र अनुमानित समयको लागी तपाईको वेब पेज स्क्र्यापिंग कार्यको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्।